Jaaliyada LAO ee 54 Qowmiyadeed ee Fiyatnaam - Qudduuska Land ee Daraasadaha Vietnam
LAO waxay leeyihiin 12,379 Deganeyaal ah oo ku foogan Dien Bien (Gobolka Dien Bien1), Phong Tho iyo Ka badan Uyen (Gobolka Lal Chau2), Iyo Heesta Ma (Gobolka Son La3). The Luqada Lao iska leh Kooxda Tay-Thai4. LAO waxay caabudaan awoowayaashood waana ay raacaan Budhiism.
Intooda badan oo ah "LAO" waxay koraan bariiska Beeraha qaraha iyadoo la adeegsanayo farsamooyin horumarsan. Xannaanada gacmeedyadooda qoysku si caddaalad ah ayey u horumarsan yihiin, oo ay ka mid yihiin dhogorta weelka loo isticmaalo, sida loo sameeyo warshadaynta, dheriga iyo samaynta alaabada.
LAO waxay ku nooleyd tuulooyin. Gurigoodu waa waasac yahay oo waa la taagan yahay oo tiir weyn oo qurxin ayaa istaaga agagaarka dabka iyo ulaha iyo dogobyada kale. Saqafku wuxuu qaloocsan yahay labada daraf wuxuuna u qaabeysan yahay sida loo yaqaan 'karapace' karapace.
Haweenka Lao aad ayaa loogu yaqaanaa xirfadahooda Dhar-dhogor. Waxay gashan yihiin sanka madow oo jaranjarada hore ilaa laabtooda, sadaqadaha waxay kuxiran yihiin moodhadh midab leh. Jaakad gaagaaban oo gaagaaban oo isku xigta oo badhamado lacag ah ayaa caan ka ah Webiga Ma gobolka. Haweenka jooga Dien Bien xidho funaanado la mid ah kuwa deriska la ah KHO MU. Gabdhaha LAO ee aan guursan ayaa had iyo jeer timahooda ku xidhnaa bidix chignon dhinaca bidix ka waydii. Haweenku sidoo kale waxay xidhaan jaakad la yiraahdo pieu. Haddii kale, waxay jecel yihiin inay timahooda ku qurxiyaan biinacado lacag ah. Waxay xidhaan dugaagado fara badan waana caado u leh inay gacmaha dhabarkooda kaga sawiraan sawirada dhirta Ragga Lao badiyaa waxay leeyihiin a swastika iyo xayawaan lagu sawiray gacanta gacantooda iyo bowdyadoodaba siday u kala horreeyaan.
LAO inta badan waxay qaadataa magacyada qoyska Bal eeg, Luong or Vi. Nasab kastaa wuxuu leeyahay tabooyin qaarkood. Carruurtu waxay qaataan magaca qoyska ee aabbaha. Qoysas dheereeya ayaa wali lagu arkaa meelaha fog fog qaarkood. Noocyada qoysaska yar-yar ee monogamic waa caan. Marka loo eego dhaqankii hore, guurka ka dib, caruusku waa inuu la noolaadaa qoyska xaaskiisa dhowr sano ka hor inta uusan ku laaban gurigiisa xaaskiisa ama ka hor inta aysan labada lamaane yeelan guri gaar ah oo la dhiso. Waqtigan xaadirka ah dhaqankani waa astaan.
Markii qofku dhinto, xaflada aaska iyo aasida si taxaddar leh ayaa loo abaabulaa. Gelitaankii hore ayaa dhacay haddii qofka dhintay uu ahaa madaxa tuulada.
In Bulshada Lao, ka waa i (Saaxiibayaal) waxay ku wanaagsan yihiin qorista iyo ka sheekaynta sheekooyinka qadiimiga ah ama sheekooyinka 'folksongs'. Waxay dib u qoraan sheekooyinka iyo sheekooyinka caanka ah. The Dhaxalka Lao folklorte waxaa saameeya taas Thailand. The lammaan qoob ka waxaa had iyo jeer lagu sameeyaa xaflado iyo xaflado.
(Booqday jeer 547, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 1,637
← Beesha LO LO ee 54 kooxaha qowmiyadeed ee Vietnam
Jaaliyadda LA HU ee 54 qowmiyadeed ee Fiyatnaam →
Beesha CHUT oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah (2,617)